Ndị na - arụ ọrụ ụgbọ elu - Global Airway Jobs - Bulite CV taa!
AGBANYE NA-AHỤ NA SHELL UK
Ọrụ ụgbọ ala Emirates
Ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates na-ahụ maka ntụzịaka ụlọ ọrụ Dubai City. Na-ekwukarị, anyị na-ede maka ọrụ ndị zuru ụwa ọnụ maka ịnya ụgbọ elu Airways. Ma ebe ọ bụ na ị daba na ibe anyị. Shouldkwesịrị ịga na ngalaba ụlọ ọrụ anyị. Gụọ ozi anyị maka ọrụ. Ma lee otu ndi otu HR anyi nwere ike isi nyere gi aka inweta oru taa. N’ezie, ọrụ ọ na - aga n’enweghị asị na mpaghara ngalaba ụgbọ elu na - eto ngwa ngwa. Kpamkpam nwere ike were gị n'ọrụ. Lọ ọrụ kachasị mma ya na onyinye karia karia nke 400 nke kachasi nma. Ha larịị bụ nnọọ ike bit. N'akụkụ dị mma, ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị arụ ọrụ ọnọdụ a na-enweghị expats mba ụwa. Iji maa atụ, ndị ọrụ ụwa sitere India na Pakistan.
Mgbe ị na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ ọbụna ụgbọ elu. Na onye ọrụ ọhụụ ga-amụta ọtụtụ nkà ọhụụ. N’ezie, n’ezie, ha niile ga-adị mkpa. Kwa afọ, ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates na-elekọta ndị isi. N’ezie adres ndị ụlọ ọrụ a oge ọ sonyere. N'ihi na ebe ọ bụ na isonyere ụlọ ọrụ ahụ. N’ezie echebara etu ị si ebi ndụ. Ọ naghị arụ ọrụ. N'ihi na ọ bụ usoro dị ogologo. Dịka ọmụmaatụ, otu ụzọ n'ụzọ anọ nke nzukọ gburugburu ụwa. N'akụkụ dị mma, ihe ịga nke ọma na uto dị ịrịba ama. Ọmụmaatụ, Etihad na Qatar Airways na-agafe oke. N’aka nke ọzọ, ndị otu Emirates kwa afọ. Inye akụkọ na ha nwere mmụba bara uru nke ọtụtụ ijeri. Na -aga n’ihu, maka afọ ego ọzọ.
Ịbanye ụlọ ọrụ ụgbọ elu kacha mma
Ọrụ ọ bụla na ụlọ ọrụ ụgbọ elu bara uru ọ bara? Approachzọ ha siri ike dị ka ndị na-achọ ọrụ Emirates na-amasị gị ?. Ọ bụrụ na azịza gị bụ ee ?. Anyi n’anabata profaịlụ gị na ụlọ ọrụ anyị na Dubai. Ọzọkwa, anyị na-agba gị ume ịmụtakwu banyere ụlọ ọrụ Dubai City anyị. N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ọtụtụ ohere ọrụ dị egwu. Iji maa atụ, inwere ike ileta ụlọ ọrụ Emirates Group Careers. na Ọrụ ụgbọelu Arabia Arabia.
Yabụ na anyị na-ele anya inyere gị aka. N'ihi na anyị nọ n'elu ọkwa gburugburu ụlọ ọrụ. Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụgbọelu. Would ga-achọ ka ụlọ ọrụ na-ekwu okwu n'ozuzu na-enye ọrụ. Enwere ụlọ ọrụ ndị Emirates na-arụ ọrụ. N'iburu nke a n'uche, ịnwere ike sonyere ọtụtụ ụlọ ọrụ. Onwere ndepụta nke ụlọ ọrụ ndị anyị mepụtara. Na isonyere ha ọ ga-adị echiche mara mma maka ndị na - achọ Job. Yabụ na ọ bụrụ n'eziokwu na ị na-enweta ọrụ n'aka ndị ụlọ ọrụ ụgbọ elu nke ga-abụ ezigbo mmalite. Anyị na-enye ọrụ ndị a gburugburu UAE. Ọzọkwa, Indonesia, Kuwait na ọbụna na Singapore. Ọ bụrụhaala na ị na - enyere ụlọ ọrụ aka itolite ma nweta nsonaazụ ya.
Malite na Jet Airways Careers n'ala mkpara
Iji malite ọrụ ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates. Echefula I kwesiri inwe otutu omuma. Karịsịa maka Mba ọrụ ụgbọ elu. Yana Middle East na Eshia. N'aka nke ọzọ, na ụlọ ọrụ Europe na US na-enye nkwado na ọzụzụ zuru oke. Anyị na-ekwuputa ndị ọrụ Jet Airways na-elekọta ala dịka ụzọ kachasị ọsọ iji nweta ọrụ. N’oge a ka ha nwere ọrụ ole na ole itinye. Ndị nnọchi anya HR anyị. Ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates na ụlọ ọrụ Dubai City. Anyị ike nye ndụmọdụ ka ị malite ọrụ ntinye aka n'ebe ahụ.
Jet Airways Careers ground staff - Ghọọ ọrụ na nke a ike!
Ụlọ Ọrụ Kasị Mma n'ọdụ ụgbọ elu iji rụọ Ọrụ
Air Arabia na Qatar, Singapore na Etihad
Ọrụ India na ndị ọrụ ụlọ - Emirates ụlọ ọrụ ụgbọ elu
Bulite CV na ọrụ nlekọta FlyDubai na Kuwait Airways. Ọzọkwa, ndị ụgbọ elu Singapore na ọtụtụ ndị ọzọ na-ahụ maka ọrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ụlọ ọrụ HR anyị nọ ebe a iji nyere gị aka. Na nweta ohere dị ịtụnanya na mpaghara Gulf ma ọ bụ Middle East. Anyị na-enwe ọtụtụ ohere maka ndị ọrụ mba ụwa na ndị isi ala. Yana na-enye ndị ọrụ si India ọrụ ịchọ ọrụ na Pakistan. Na akụkụ dị mma na Qatari na Ndị ọrụ Saudi Arabia na-eti otu ndị ọrụ njikwa anyị. Yabụ, biko zigharịa ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ tinye ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'okpuru wee chere maka ọrụ dị ịtụnanya ga-abịa malite ibi ndụ nrọ. Ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates na-arụ ọrụ a Citylọ ọrụ Dubai City na-eche gị!.
Bulite CV na ọrụ nlekọta FlyDubai na Kuwait Airways. Anyi no ebe a nyere gị aka inweta ohere ọrụ dị ịtụnanya na Middle East. Ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates na ụlọ ọrụ Dubai City na-amalite ajụjụ ọnụ a na-aga ije. Anyị na-enwe ọtụtụ ohere maka ndị na-achọ ọrụ mba ofesi. Ya na ndi si India na Pakistan na Qatar. Zigharịa na ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị n'okpuru.
Ndị kasị mma ụgbọ elu n'ụwa na-arụ ọrụ!
Otu kacha mma nzukọ na-arụ ọrụ n’ụwa. Bụ ịrụrụ ụlọ ọrụ Airlane ọrụ. N’akụkụ na-adịghị mma, enweghị ụgbọ elu kacha njọ n’ụwa. N'ihi na anyị na-eji ha oge niile. Yabụ, akara akara na-agagharị mgbe niile. N'iburu nke a n'uche, ụlọ ọrụ anyị ekpughere ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ. Na ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ ya ebe inwere ike nweta ajuju ije ije. N'ikwu okwu n'ozuzu, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-achọ ọrụ dị ịtụnanya. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na- gota na Middle East.
Yabụ, ihe ị ga - eme na ngalaba a. Lọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na-ewe ọrụ maka ụlọ ọrụ chọrọ afọ isii. Kụrụ isi ozi banyere ọrụ ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-enye. Ọzọkwa, dabere na ịdị mma nke ọrụ. Mmadu nwere ike inyocha ma o bara uru inweta ọrụ na ụlọ ọrụ a kapịrị ọnụ. N'aka nke ozo, i nwere ike ihu oru na aru oru. Na ebe itinye n'ọrụ dị ka onye ọrụ Filipaị. Ọzọkwa, kwupụta nhazi maka ọrụ si mba ofesi. Na iji lelee ihe dị mkpa maka ọrụ na mkpokọta akara. Ya na ụlọ ọrụ na-elekọta ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates. Naanị gị ndụmọdụ ha na-ewe ndị ọrụ Russia ụgwọ.
Ndị ọrụ ụgbọ elu kachasị elu na-egosi na ọrụ kachasị mma na-enye. N'iburu nke a n'uche, anyị na-ekwu maka ụgwọ ọrụ. Ọzọkwa, ọrụ ndị ahịa bụ isi ihe maka ọrụ ndị a. Yabụ, don'tkwesighi ịnye okomoko mere CV iji wee nweta ya. Ihe niile ị ga - eme bụ pịa na foto a. Pịgharịa gaa hụ Qatar, Kuwait na Singapore na UAE. Thelọ ọrụ ụgbọ elu kacha mma n'ụwa maka ịrụ ọrụ maka ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates. Ma anyị họọrọ ke mfe ịnyagharịa iji ha n'ozuzu ọrụ placement akara.
Ọrụ kacha mma nke Airways n'ụwa nile!
N'okpuru ị nwere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mkpirisi should ga-ezitere CV gị. N'iburu nke a n'uche, gbadaa na ị ga-ahụ nkọwa ndị ọzọ. Yabụ, ọrụ ụgbọ elu Emirates ma ọ bụrụ na ha ziri ezi maka gị. Nwere ike ijikwa onwe gị na ngwa Ndenye n'ịntanetị. Nwere olile rụpụta ezigbo ihe na ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates na ụlọ ọrụ Dubai City. Pịa n'okpuru aha ụlọ ọrụ na njikọ ngwa.
Ọrụ ụgbọ mmiri gulf
Ọrụ ụgbọelu ndị Britain
Ọrụ ụgbọ elu Arabia
Ọrụ India India
Ọrụ Etihad Airways
Arụ ọrụ ụgbọ elu
Ọrụ ụgbọelu Jet Airways
Ọrụ nlezianya Qatar
Ọrụ ụgbọ elu Singapore
Gịnị mere o ji dị mma itinye akwụkwọ maka ụlọ ọrụ Emirates Airlines?
Daysbọchị ndị a, ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ. Ile anya maka ụgwọ ọrụ dị elu. Na naanị nnukwu ụlọ ọrụ na-enye nke ahụ. Ohere nke 10 Emirates Airlines na-elekọta. Na-adị mfe karịa $ 150,000 kwa afọ. Dubailọ ọrụ Dubai City na-ahụ maka ndị ọrụ. Ọzọkwa, anyị nọ ebe a iji nyere gị aka. Ka ihe siri dị, Emirates na-abịafe efefe na Dubai. Ndị otu anyị na-ele anya inyere gi aka inyere gi aka ibu onye oru ha. N'ihi na azụmaahịa ha bụ inweta ọtụtụ mmadụ dịka ha nwere ike. Na-ekwukarị, ịchọta ọrụ dị ịtụnanya ọ na - ewe oge. N'ime ihe karịrị 80% nke ndị na-elekọta ụgbọ elu. Ọ ga-adị mkpa ka ị mụta ọtụtụ nkà. Otu n’ime ihe atụ a bụ ikike ọrụ ndị ahịa na ndị isi ego. Ya na ndi mmadu. Yabụ narị ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịkarị onye nwere ike igba gi ahia gha enye gi ọzụzụ.
Ma anyị ga-ahọrọ naanị ole na ole n’ime ha. N'ihi na anyị maara na ọ bụrụ na ị ga - esoro na 20 ma ọ bụ 30 nke ha. Thatzọ ahụkwa nke gị Ohere inweta ọrụ na Dubai ọ ga-abawanye. Dịkwa ka anyị na-etinye ụlọ ọrụ kachasị mma. Onweghị ihe ịtụ ụjọ na nke kachasị mma sitere na Middle East. N'ezie na Qatar Saudi Arabia United States nwekwara. Ndị ụgbọ elu Emirates Ndị ọrụ na Citylọ Ọrụ Dubai City ga-abụrịrị ọrụ gị.
Ogologo ndu na ọkwa nke oru
Dị ka onye nwere ike ịrụ ọrụ na ụdị ụlọ ọrụ a. You nwere ike igbanye nnukwu ego ma bido ibi ndụ dị ịtụnanya. Ego gị ọ ga na-eto ma na -ebi ndụ ọ ga-ebelata. O siri ike ikwu nke ụlọ ọrụ dị mma. N'ihi na ha niile na-enye ndị ahịa ha ọrụ dị ịtụnanya. Yana ndị ọrụ na ọkwa nke njikwa omenala. Yabụ ka anyị bido ọrụ ndị bụ isi.
Citylọ ọrụ Dubai City na nke ọma obere mkpụmkpụ maka ndị ọrụ. Na-egosi gị ọkwa ahịa azụmahịa kacha mma. Site na uzo ohuru maka ndi etinye ego ahia. Ihe a niile bụ maka ndị na-achọ ọrụ. Naanị otu ọkwa azụmaahịa a dị iche. Lelee anya n'okpuru maka ngalaba dị iche iche. Maka onwe gị na-ele anya na ị ga-eme ya chọpụta ntakịrị ihe gbasara ụdị azụmaahịa a.
Ọrụ Emirates na-arụ ọrụ ụgbọ elu
Ọ ga-eju gị anya. Banyere ego ị ga-enweta ka ị na-arụ ọrụ nbanye ọkwa. Karie jiri ụgbọ elu ọrụ ụgbọ ala. Yabụ, na, ikwu maka ọrụ ndị kachasị mkpa ị nwere ike ịchọta bụ na Dubai City dị ịtụnanya. Ndi oru nhicha, ndozi ulo yana ndi ahia. Na-echere ndị ahịa akụkọ na-ere ahịa. Dika odi, ndi nkpa ndi isi ahia di nma ịga. N'aka nke ọzọ, anyị na - achọ obere ụzọ ka mma karịa gị. Ha bụ ọrụ ndị nwere tiketi na-ere na onye ọrụ ihe niile. Dị ka ụgbọ elu ụgbọ elu na-ere ọfịs na njikwa ụlọ ọrụ.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnweta onwe gị wee malite ire ọrụ ịntanetị. Naanị ụzọ dị mma ịntanetị na-eto. Yabụ, ị ga-enwe ezigbo ọmarịcha ebe ị na-arụ ọrụ. Ya mere, ka anyị chee na ị nwere ike ịrụ ọrụ n'ọfịs. N’ime oge anya, inwere ike ibu onye oru ohuru. Iji maa atụ, bido ịtọ ntọala ndị dị mkpa. Ọ dị ezigbo mma ohere ọrụ na ọkwa ntinye nke oru na agbazite ugbo ala. N'ihi na ugbu a ụgbọ elu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na Turkey.
Ọrụ nbanye n'ime ụlọ ọrụ
Enwere ọrụ karịrị otu narị maka nke ọ bụla ụlọ ọrụ ị nwere ike ịrụ ọrụ. Otu n’ime ihe atụ nke ahụ bụ ijere ndị ọzọ toro eto ọrụ n’ọtụtụ oge ọ bụ ụdị ọrụ ọrụ. Naanị n'ihi na ọ siri ike ime ya na ọ bụghị mmadụ niile ga-erite uru na ya. Hichaa tebụl ma wepụ ahịhịa. Ma ọ bụ ọbụna na-egbu egbu ala. Nke ahụ bụ ọrụ ị ga-atụ anya na ọkwa ntinye. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere mmụta dị ịtụnanya ị nwere ike ịmalite dị ka onye njikwa ọzụzụ. N’iburu nke a n’uche, ụgwọ ọrụ gị ga-eto nwayọ nwayọ. Ma ị ga-enwe ike inweta ezigbo ihe. Karịsịa na ụgwọ a na-akwụ na Dubai n'obodo Abu Dhabi. Ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu Emirates na ụlọ ọrụ Dubai City doro anya ọ bara uru ịga.
The Middle Management Airlines Ọrụ
Ọkwa ọzọ mgbe ọ gbasara ọkwa dị n'etiti ohere nchịkwa. Na ụdị ọrụ a, ị bụ ọnọdụ dị mma. Ma ị chọrọ na-eto maka ọrụ ke Dubai. N'ihi Airlineslọ ọrụ ụgbọ elu. Aga m etolite ma na-atụ anya ito n’ọdịnihu. Ya mere, ha ga-enye gị ọnọdụ a maka 4 gburugburu afọ 10. Ma nyere gị aka ime nke ọma. Omume obula I gha acho ijere ndi ahia aka. N'ihi na ị ga-adị n'etiti ntinye larịị na nchịkwa Senior ya mere. Etosiri m ịga kọmitii ndị isi. Ya na ndi njikwa ego nke ndi mmadu, ndi isi ahia, ndi na aru oru. Ha niile ga na-enyocha ọrụ gị. Nyere gị aka ụbọchị niile. N'akụkụ aka nke ọzọ, ndị gị na-achị achị bu isi. Ọ ga-adị mkpa ijikwa ya. Yabụ na ọ bụ ogologo oge ọ na-enwegharị.
Ndị na-elekọta ọrụ ụgbọ elu
Ya mere, ka anyị chee na ị ga-arụ ọrụ elekere 8. Ihe abuo ndi ozo i n’ezi ka ebu n’enwe ugbo elu ka agha gha enweta gi. Ihe karịrị 80% nke ndị njikwa na inlọ Ọrụ Na-ebugharị ụgbọ elu. Rebịaru ọkwa ọkwa-nduzi n’ime afọ 10. N'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anya isi na nke ahụ. Onye isi ọhụụ ahụ na-amalite na ọkwa ntinye. Ọtụtụ n'ime ha rụtụrụ aka na mgbasa ozi. Nke ahụ bụ osote onye isi ala ha. Bido dị ka onye na-enyere aka n’ịgwọ ọrịa n’ụlọ ọrụ a. Yabụ na ịnweghị ọnọdụ iji gosipụta onwe gị. Ma enwere n'agbanyeghị ebe i siri bịa ọbụna Pakistan. Ọzọkwa, South Africa ma ọ bụ Saudi Arabia. Ma ọ bụ ọbụna Philippines niile ndị mmadụ nwere ohere ịnwe ụgbọelu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ohere.
Ogologo ndị ọrụ nlekọta nchịkwa
Ọtụtụ ụlọ ọrụ gburugburu ụwa. Ndi n’ezie enye ulo maka onye ọrụ ha. Gbanye ụgbọ elu n'ụlọ ha ma ọ bụrụ na ha bụ ndị mba ọzọ. Mmụta maka ụmụaka. Na ịtụnanya ị nyefee ndụ ịbụ. Na mgbakwunye, iji nweta gị nke ahụ ga-enye gị laptọọpụ na ụgbọ ala egwuregwu. Yabụ, ndị na-elekọta ụgbọ elu dị mma ịga ma bara uru ichere. Y’oburu jiri BMW dochie onwe gi. Ma ọ bụ ọbụna na a Bentley. Na etiti nke ụlọ na ebe igwu mmiri. Ekwesịrị ikwu, na onye ahụ maara azụmaahịa ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na-amasị gị inwe ọganihu nke elu. Maka onye isi ma ọ bụ nwee ọkwa dị elu karịa nke ahụ. Ọ bụ ọkwa nke itinye ego. Onwere ebe ndi mmadu n’efe ugbo elu. Ndị isi oche ụgbọ mmiri VIP VIP na-enwe helikopta nke ya.
Ndị ọrụ ụgbọelu na ndị nlekọta ụgbọelu
Yabụ, ọ bụrụ n’ịchọọ ọrụ na nnukwu ebe a na-egwu mmiri. Na ụdị ndụ dị ịtụnanya dị ka nde mmadụ. Nwere ike nweta nke ahụ na ụlọ ọrụ Dubai. E nwere ọtụtụ ndị mba ọzọ na-enweta ọrụ n’ụwa niile. Na ịhapụ ọkwa ndụ dị oke mma. N’iburu nke a n'uche, anyị na-ekwu maka ndị India na ndị Pakistan. Yabụ na ị si mba a bịa. Kwesịrị ị nweta nnukwu ọrụ nchịkwa. N'ihi na n'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ka mma isi too. I nwedịrị ike ịghọ onye na-anya ụgbọelu. E nwere ọkwa ọzọ nke ọrụ nchịkwa agadi na ụlọ ọrụ ụgbọ elu. Elu ugwo oru ndi n’uwa n’uwa nile. Dịka ọmụmaatụ, otu ọkwọ ụgbọ elu dị elu na-akpata nnukwu ego. Ma ọ bụ onye njikwa ọrụ yana onye njikwa mpaghara. Ọ bụ ha abụọ na-enweta ezigbo ego na Middle East ?. Nke ahụ, n’ezie, na-enye ha ohere ịkwọ ụgbọala dị mma.
Onye na-azụ ahịa na ndị nwe ụgbọ elu
Na ngalaba a nke ahụ bụ nnukwu ego. Ọtụtụ n'ime ndị na - achụ ego azụmaahịa na ndị nwere ụlọ ọrụ ụgbọ elu bụ ndị nwere ijeri. Ma n'eziokwu, enwere nnukwu mba di iche. Ọtụtụ ndị America yana ndị Canada. Ọzọkwa, ndị Arab si United Arab Emirates. Mụ na ndị na-etinye ego na Middle East n’ozuzu ha. Ijikwa ụdị azụmahịa a. Ọbụna Onye nwe ya Sheikh Mohammed bin Rashid nwere akụkụ nke ahụ. Na n'ezie a otutu ego na ụdị azụmaahịa a. N'ihi ngosipụta azụmahịa ya nke mba ụwa. Onye ọ bụla ma ya ma na-akpata ego. Onu ogugu ndi mmadu na-arụ ọrụ ebe ahụ ozi nkewa. Anyị amabeghịkwa ego ole azụmahịa a na-akpata. Naanị ọnụọgụ ndị mmadụ na-arụrụ gọọmentị maara nke ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ndị ụgbọelu na-eme azụmahịa
Yabụ iji ghọọ onye na-etinye ego na ụdị azụmaahịa a. Ikwesiri inwe ahia di iche na mbu. Ọtụtụ ndị amaghịdị n’onwe ha. Na n'ezie ole ole ndị a ndị mmadụ na-eme. Naanị ọnụọgụ ndị mmadụ kpọrọ oku maka gọọmentị maara otú ihe a niile si arụ ọrụ. Yabụ, naanị ka ọ bụrụ onye na-etinye ego na ụdị azụmaahịa. N’ezie, ị ga - eme ahịa dị iche iche n’oge gara aga. N'ihi na ulo oru mbo njikwa. N'ezie, rụọ ọrụ na ụdị azụmahịa a. Ọ chọrọ ọtụtụ ahụmịhe. Mana ịkwesịrị ịgba mbọ hụ na gọọmentị na aha ndị ọzọ na ndị ọzọ na - etinye ego na nke ahụ ị bụ ezigbo mmadụ.
Mba Ọrụ Nlekọta Ọrụ Maka Ụlọ Ọrụ Mba
Ndi otu Emirates bụ ị na-achọ ndị na-achọ ọrụ. Ọ dị mma, ruo ugbu a ụlọ ọrụ a bụ ụlọ ọrụ kachasị ukwuu. N’iburu nke a n’uche, ọ ga-aba uru ịnweta ọrụ ha na-enye. Emirates bụ otu ụlọ ọrụ. Yabụ, ọ bụrụhaala itinye otu mgbe. Ga-enwe ya ngwa gị na ọtụtụ ụlọ ọrụ. N’ikpeazụ, ọ ga-aba uru. Firmlọ ọrụ a na-ekwupụtakarị bụ ụlọ ọrụ kachasị mma na United Arab Emirates. Oge ị malitere ụlọ ọrụ a. Obi ga-adị gị mma ike Dubai na Abu Dhabi na-azụ ahịa.
Mba ndị ọrụ N2 FlyDubai
Fly Dubai nwekwara otu n’ime nzukọ na-aga n’ihu. Na flydubai ị nwere ike ikwu okwu ịdebanye aha maka ọrụ ọkwa. Yana ịgbakwunye data nke gị. Ọzọkwa, debanye aha CV gị. Ma nwetakwa ileba anya na uru na ọdịnala. Yabụ na-asụkarị ma ọ bụrụ na ị na-achọ enyemaka enyemaka. Ndị ọrụ ụgbọ elu ndị Emirates na-arụ na ụlọ ọrụ Dubai City ọ bụ echiche amamihe. Maa, ụlọ ọrụ a na-achọ inyere gị aka. Ọzọkwa, ịkwesịrị bulite mmalite ịmalitegharịa gị ebe ahụ. Ma tọọ ụfọdụ ọkwa ọrụ. N'ihi na ụlọ ọrụ a, ọ ga-etinye gị n'ikpeazụ.
Mba ọrụ Nne na Ala Arabia
Air Arabia na-enye ọrụ nwere mmasị. Na Ọrụ ndị ụlọ ọrụ na-enye bụ ọrụ ndị metụtara ọrụ ụwa niile. N'agbanyegh i na ih ur u mmas i n'ebe i na-ar u or u. Na-ekwukarị, ụlọ ọrụ Air Arabia ga-ewere gị n'ọrụ. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ HR na-achọ gị kachasị mma n'ịchọ ọrụ gị. Iji bido n’ime ha, iga apinye aka tinye. Mgbe ahọrọ maka ọnọdụ ọ bụla. N'ikpeazụ, ịnwere ike pịa bọtịnụ itinye Ugbu a. Nwere ike ịnwe ọrụ njikwa ngbanwe. Ndị isi ahịa ahịa na Saudi Arabia na injinia ọnọdụ dị na Turkey. Na Middle East ma ọ bụ Europe. Clọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu Emirates na ụlọ ọrụ Air Abarbia. Ọ ga-abụ ezigbo echiche.
Ulo oru ugbo ala Emirates - Ugbo ala Ara Arabia
Ọrụ Nlekọta Ọrụ Ọrụ Nlekọta Ọrụ Ọrụ Nlekọta
Air Arabia na-enye ọrụ nwere mmasị. Ọrụ ndị ụlọ ọrụ ahụ na-enye bụ ọrụ ndị metụtara ọrụ ụwa niile. Mgbe ị chọta mmasị gị na ọrụ ị na-enye. Na-ekwukarị, otu ụlọ ọrụ Air Arabia na-ewere ndị ọrụ ọhụrụ. N'ezie kwa na United Arab Emirates. Ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates ya na ụlọ ọrụ Dubai City bụ ọmarịcha ngagharị. N'oge ịchọrọ ibudata faịlụ. Ọzọkwa, lelee ozi banyere otu ọrụ enyere gị. Ma tinye akwụkwọ maka ụlọ ọrụ a.
No5 Wizz Air Ọrụ na Ọrụ
Companylọ ọrụ Wizz Air na-arụkwa maka ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates. N'ikwu okwu n'ozuzu, ha na-enye ụdị ọrụ atọ. Nke mbụ Ohere ọrụ ị nwere ike ịchọpụta na Poland. Bụ ohere ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ. N'aka nke ozo, ị gha enwe oru Ọ ga-abụkwa ya arụ ọrụ mmadụ, ngalaba ahịa. Maka ụdị ọrụ a n'ọtụtụ oge, ị ga-arụ ọrụ na akwụkwọ na kọmputa. Nhọrọ nke atọ nwere Wizz Ikuku bụ ịghọ onye ọkwọ ụgbọ elu. Na-ekwukarị, nke a bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma. N'ihi na ndị ọkwọ ụgbọ elu si n'obodo nke ha na-efe efe. Ma ụlọ ọrụ dị na-enye nkwado zuru oke na ọzụzụ na gburugburu usoro iwu. Ya mere, ụlọ ọrụ obodo Dubai na-adụ gị ọdụ ka itinye akwụkwọ maka ụlọ ọrụ a. Ndị otu anyị kwenyesiri ike na ọ ga-abara ya uru kwa nkeji na ụlọ ọrụ a. Ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates na-arụ ọrụ a Ọrụ WizAir website ọ ga-adị mma ịmalite.
Companylọ ọrụ ọzọ maka ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates. Oge a na ụlọ ọrụ United Kingdom. British Airways bụ nnukwu ụlọ ọrụ, na-akwụ ụgwọ na London, Dubai na New York City. Yabụ, na-achọ ezigbo ụlọ ọrụ bụ ụzọ ọrụ maka ha. Firmlọ ọrụ a, na-ekwukarị, na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Heathrow. Azụmaahịa Britain nwere ikike ịme ahụmịhe ndị ahịa kwesịrị ncheta. Ọ bụrụ na profaịlụ gị ga-adaba na mkpa ha. Ebe ọ bụla ha na-arụ ọrụ, na ala ma ọ bụ ikuku. I nwere ike ezigbo ohere na ha. Ma ị nweela onye isi na-ahụ maka ọrụ ma ọ bụ onye gụchara akwụkwọ. Ma ọ bụ ọbụlagodi ịmalite ọrụ na UK should kwesịrị ịnwale ọrụ ọrụ British Airways gị.
No7 Etihad Care Airways
Yabụ si na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ruo na atụmatụ na atụmatụ ọrụ yana ọrụ nchịkwa onye na-anya ụgbọelu gụnyere na ndị na-ebu azụmahịa. ụlọ ọrụ a ga-enwerịrị ohere sara mbara na United Arab Emirates. Ọ ga na-arụ ọrụ nke ọma nke Dubai na Abu Dhabi. N’ezie, azụmaahịa ahụ hiwere isi n’etiti azụmahịa nke ile ọbịa dị n’etiti Middle East. Ọ bụrụ na ị nwere oke mmasị n’ozi ndị mmadụ. Companylọ ọrụ a bụ n'ezie otu n'ime ebe kachasị mma maka ndị otu na-arụ ọrụ. Inwere ike inweta ọrụ dịka onye isi ụgbọ mmiri ma ọ bụ SFI ohere ọrụ.
No8 Norwegian Airline Jobs
Ọ bụ onye Norwegian nkwụsi ike ịrụ ọrụ. N'ihi na nzukọ a nwere otu n'ime ụgbọ elu ụgbọ ala kachasị ọhụrụ n'ụwa. Ọzọkwa, a na-enye iwu maka iwu ụgbọelu ọhụrụ 260. Yabụ, dabere na ọnụ ọgụgụ ahụ. Ọ ga-aba uru kpọtụrụ ndị nnọchi anya nlekọta ọrụ HR. Airlọ ọrụ Norwegian ga-elekọta arịrịọ nke ọtụtụ narị oghere ọhụụ n'ime ụlọ ọrụ n'ọdịnihu dị nso. Nke a pụtara na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ọtụtụ ndị ọzọ iji sonyere nke ha Ezinụlọ Norwegian. Ma n'ezie, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ha. Gaa n'ihu na deba aha gị nkọwa Ụlọ ọrụ ụgbọ elu Emirates na ụlọ ọrụ Dubai City Company.
Arụ ọrụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ na-efu
Ya mere oge a anyị na-enyochagharị bụ ụlọ ọrụ ndị India. Companylọ ọrụ a bụ ezigbo ụlọ ọrụ na India aha ya na-aga Airlines India Limited. Ọ bụ maka nyocha maka ndị India dị iche iche na ebumnuche ha bụ ịnye ụgbọ njem echekwabara na nke ọma. Maka ndị ọrụ ha niile na ndị ahịa ha. Ka oge niile ha na-elezi anya na ọrụ ndị otu na ndị ahịa ha. Ha nwere ike iji mepụta ọrụ pụrụ iche. N’ikwu okwu n’uwa, maka ndi mmadu di iche iche na onye ha na ha no n’otu.
Mba 10 KLM Royal Dutch Airlines
Companylọ ọrụ ọzọ nke ihe nkiri anyị na-enyocha bụ KLM nke a ụlọ ọrụ na-akwụ ego n'ezie ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ yana ndị ọrụ ala na ndị mmadụ nwere ezigbo ahụmịhe n’ahịa. Nwere ike ịtọlite ​​ụzọ niile na-ekwu maka ọrụ njikere ma ị nwere ike ịchọta ọrụ n'ọtụtụ ebe. Dị ka USA Europe Canada na N'ezie, anyị pụtara na ọ bụ. Anyị na-adụ ọdụ ike ka anyị nwaa inweta ọrụ ahụ. Ọ nwere ike ezigbo ike ime ya si India na Pakistan. Mana ọ ga-adịrị gị mfe ịnweta site na Dubai na South Africa na ndị ọrụ mba ofesi. Ga-enweta ọrụ ma kwụọ ụgwọ ọrụ mara mma.
Ugbu a bụ oge maka Virgin Atlantic ụlọ ọrụ kachasị mma n'ụwa na-enye otutu ohere maka ọrụ ndị ahịa dịka ọmụmaatụ site na ọdụ ụgbọ elu gaa na ebe ọrụ ndị ahịa. Nwere ike iji ha chọpụta nnukwu ohere ha nwere. Ị nwere ike na-enweta ọrụ ahụ mgbe niile n'isi ụlọ ọrụ. Ma site na ọnọdụ nchịkwa, ịnwere ike ịtụle nke a kwụsie ike, ị ga-arụkwa ọrụ n’azu ihe nlere ma oburu na ibu onye mara ihe n’iru inwere oru di iche iche. N’aka nke ọzọ, anyị nwere ibu site na supercars ruo enweghị ahụmịhe ịnya ụgbọ ala ọzọ, ị ga-enwe ya. Injinịa injinịa ga-abụ nke ọmụmụ.
N'akụkụ aka nke ọzọ, will ga - enwe onye ndu. gị na ụlọ ọrụ a, ị ga na-edu ma na-akwụghachi ụgwọ ndị na-azụlite onwe ha. Ma mgbe ahụ anyị nwere ọrụ injinịa na ịrụ ọrụ. Na-ekwukarị, iji nweta ọrụ a. Ikwesiri inweta ogo injinia. Ọtụtụ ọrụ ga-arụ na Lọndọn. Anyị nweziri ndị na-anya ụgbọ elu n’ọdịnihu na ndị na-efe efe. Dịka ọmụmaatụ, feere n'ụgbọ elu kachasị emelitere.
Ọnụ ọgụgụ ọrụ Nickel Jet Airways ohere
Ndị ọrụ ụgbọelu Emirates na Jet Airways. O di nma, Jet Airways di na-efe efe n’ụwa niile. Nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ Arkansas ọtụtụ. Ma enwere otutu ohere. Iji maa atụ, inwere ike inweta okenye maka ọrụ ụgbọ elu, n'okpuru ohere ọrụ. Yana onye isi mbu. Iji fegharịa ụgbọ elu n'aka nke ọzọ anyị nwere Nchịkwa Revenue yana njikwa arụmọrụ n'etiti ụlọ ọrụ. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịchọta ọrụ ọrụ nọọsụ. Yana ọrụ ndị ahịa.
Ya mere, ka anyị chee ọrụ niile ụlọ ọrụ ahụ ga-arụ. Okwesiri inweta ya. N'ihi na ọbụlagodi ma ị nweta ọkwa onye isi. Jet Airways bu nnukwu ulo oru. Na ha gha enye gi otutu ohere. Ọzọkwa, ị ga-azụ onwe gị. Ma burukwa ezigbo onye njikwa. Yabụ, ụlọ ọrụ obodo Dubai na-enyere expats aka. Iji soro ha pịa pịa foto dị n'okpuru. Na-ekwukarị, ụlọ ọrụ a zuru oke maka ọrụ na Mumbai. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ ọchụnta ego India. Ikwesiri izipu CV na ulo oru a.
Ndị ọrụ ụgbọ elu ndị Emirates na-arụ ọrụ Kuwait Airways. Companylọ ọrụ ọzọ anyị ga-achọ ịtụle. Bụ Kuwait Airways. N'ihi na ebe i nwere ike nyochaa omenala ụlọ ọrụ. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ ohere. Iji maa atụ, ohere ndị ọrụ izugbe mba ụwa. Ya mere bia ma oburu n’acho ibu onye ugbo elu i nwere ike imalite n’oru a. N'aka nke ozo, oburu na ichoro inweta ohere iru oru ma obu obuna Teknụzụ ụlọ ọrụ ego enweghi ohere ị nwere ike isoro ha rụọ ọrụ. Ma n'ikpeazụ anyị nwere ọrụ mmadụ na arụ ọrụ. dị ka eziokwu, ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ ego maka ọkwá dị elu. Citylọ ọrụ obodo Dubai bụ n'ezie na-eburu ndị na-achọ ọrụ na weebụsaịtị a. N'ihi na anyị niile maara ọrụ anyị nwere ike ịnye. Odi nma ka ijikwa onwe gi ma mee ezigbo ego.
Ọrụ Nne na-arụ ọrụ na arụ ọrụ
Companylọ ọrụ ọzọ anyị nwere mmasị ịme ka ị mata bụ ikuku Malta. Companylọ ọrụ a, na-ekwu okwu n'ozuzu ya, na-anata site na obere mba dị na Europe. Ma, ọ bụ nnukwu nzukọ. Na izugbe na-ekwu okwu dị mma n'oge ọ bụla. Yabụ, ọ bụrụ n’ịchọrọ ị nweta ụlọ ọrụ na Ohere ọhụrụ iji rụọ ọrụ. Gbalịa nzukọ òtù ikuku Malta. Ka anyị were gị dị ka Europe ma rụọ ọrụ gị na Malta. N'ezie, nye gi ezi mmalite. Companylọ ọrụ obodo Dubai na-elepụ anya n'ihu. Iji nyere ndị na-achọ ọrụ aka na anyị nwere nganga nke onye ọ bụla. Kedu ihe ga-edebanye aka na ụlọ ọrụ anyị? Ma ọ bụ na nke ọ bụla nke Emirates Airlines Ọrụ.
Ọrụ Nzuzo na N15 na Qantas
Ọrụ na Qantas ụgbọ elu. Ọzọ ezigbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ maka. Ọbụghị naanị ndị na-ahụ maka ihe nkiri Emirates. Ọ dị mma maka ndị ọrụ, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ. N'iburu nke a n'uche, ndị na-achọ ọrụ na-achọ ịbụ akụkụ nke otu Qantas. Mana nke ahụ adịghị mfe, n'ọtụtụ oge chọrọ ka esetịpụ ọkwa onye otu ọhụrụ. Ọzọkwa na -aga na nsogbu dị iche iche. Companylọ ọrụ a ga-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi siri ezigbo ike. Ọtụtụ ndị asọmpi na-arụ ọrụ na ahịa Airlane. Nke a bụ ihe mere Qantas ji atụ anya ọtụtụ ihe n’aka ndị ọrụ ha. Dika eziokwu, njikwa na-atụ anya iru ihe agaghị ekwe omume. N'akụkụ dị mma, ụlọ ọrụ ahụ na-akwado ndị njikwa otu ha mgbe niile. Ọzụzụ na nkuzi otú ezigbo onye ndu dị. Ọzọkwa, ka esi atụkwasị obi ma na-enye ndị ọzọ ndụmọdụ. Nwee anya n'okpuru.
Ọrụ Nzuzo NickNUMX na Aegean
Corlọ ọrụ Aegean, ụlọ ọrụ ọzọ maka ndị ụgbọ elu Emirates Careers. Na-ekwukarị, ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ site na ọkwa kachasị elu. Ebumnuche ha bụ iwelata aka dị n'etiti ndị ahịa na onye ọrụ ha. Ha na na-ele anya ime ka ị bịaruo nso n’ihe ịchọrọ ịchọpụta. N’aka nke ozo, otutu ndi njem na uzo akwukwo di ma na acho ime ha ihe ha n’iile. Isi okwu bụ ịkwanyere na ịzụlite n'ahịa. Ka ha na-ewelite ndi oru ha na inye aka kwado ndi ha na ha bi n’ime obodo.
Enwere ndị njem njem karịrị nde 12 kemgbe 2012. Ife efe njem 145 na ha na -eme ihe karịrị 1 billion Revenue. Na mba 45. Ọzọkwa 89% nke nzukọ ahụ na-enyere aka na gburugburu nchekwa. Companylọ ọrụ ahụ bụ ndị mmekọ Star Star ma ha na-etinye nnukwu ego Investments. Yabụ na ọkwá gị ga-adị na oge adịghị anya. Maka ndị ọrụ na-abịanụ ga - abụ nnukwu ohere nke itolite.
Ọrụ No17 na Austrian Airlines
Ndị ụgbọ elu Australia bụkwa ndị egwuregwu kachasị elu n'ahịa ahụ. Ugbu a ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ọrụ aka. N'iburu nke a n'uche, nke ahụ bụ aircrew yana ndị ọrụ ụgbọ njem, ndị ọkwọ ụgbọ elu, ọrụ aka ọrụ, isi ụlọ ọrụ na ọbụna ọzụzụ. N'akụkụ aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ ndụmọdụ na nduzi na ị nwere ike iji maka ọrụ ụgbọelu Emirates. Otu n’ime ọmụmaatụ ụgbọ elu ndị Austrian nwere bụ blọọgụ dị ịtụnanya. Ha na - ede akwụkwọ gbasara ndị otu banyere Fleet ha na banyere onye na - anya ụgbọelu ha na ọrụ ha. N'ezie, ọ na-ele anya dị ịtụnanya ma jide n'aka otutu mmadu nwere ike inweta uru si na blog ahu. Nwee obere ntakịrị ma pịa foto ọ ga-ewe gị gaa na peeji nke ha. Kpamkpam gaa n'ihu wee tinye akwụkwọ maka ọrụ wee chọọ inweta ọrụ ahụ.
Arụ ọrụ No.18 na South African Airways
Chọta ọrụ abụghị ihe dị mfe. Companylọ ọrụ ọzọ anyị nwere mmasị ịtụle n’isiokwu a. Ndị na-ahụ maka ụgbọ elu South Africa na-ekwukarị ụlọ ọrụ a bụ Airline na-enweta ọtụtụ ihe nrite. Isi ụlọ ọrụ isi nọ na Harrisburg gị na South Africa. Companylọ ọrụ na-arụ ebe ndị njem 78 zuru ụwa ọnụ. N’akụkụ adịghị mma adịghị mfe iji soro ụgbọ elu a na-aga. dị ka ha bụ otu n'ime ụgwọ ụgbọ elu kacha mma. Ọtụtụ mmadụ na-anwale iji nweta ọrụ na ha. Anyi aghaghi icheta na South Africa adighi nfe inweta Visa. Yabụ ị ga-agarịrị mgbe ọ bụla otu izu. Gbalịakwa ịchọpụta ohere ndị ha nwere ugbu a. Ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates na-ahụ maka ụlọ ọrụ Dubai City Company seams smart iji bido ụlọ ọrụ a.
Ọrụ Nlekọta Ọrụ Na-arụ ọrụ Nlekọta Ọrụ Na-arụ Ọrụ Maka Ọrụ
N'ezie ụlọ ọrụ Lufthansa agaghị eme ka onye ọ bụla mata. N’ezie otu n’ime ndị egwu kacha ibu n’ime ụlọ ọrụ ụgbọ elu ụwa niile. Ma oge a ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ọrụ si ọkachamara IT ruo na njikwa ọbụna Senior Management nke arụmọrụ. Onye na-elekọta ahịa yana onye na-enyere aka nhicha. Soro ụlọ ọrụ a jide n'aka n'ezie, ịnwere ike ịnweta ọrụ ọ bụla. Nanị akụkụ na-adịghị mma bụ enwere mkparịta ụka siri ike ịgafe. N'akụkụ dị mma, ị nwere ike ịchọta weebụsaịtị ha nke ọma. You nwekwara ike nyochaa ọnọdụ ngwa gị yana data nkeonwe. Ọbụna ndenye aha ọrụ yiri dị maka ndị na-achọ ọrụ. N'iburu nke a n'uche, ndị ọrụ ụgbọ elu ndị ụlọ ọrụ Emirates na ndị ụlọ ọrụ Dubai City n'ihi na adịkwa m maka gị.
Anyị nwere ebe naanị ụlọ ọrụ a na ala nke ndepụta ahụ. N'ihi na ọ bụ ụlọ ọrụ dị na Europe, ya mere, ọ bụ ya mere na ọ nwere ike isi ike iji nweta Visa na Europe. N'akụkụ dị mma, ụlọ ọrụ a na-ezokwa na Middle East na Egypt. Na obodo ole na ole ndị ọzọ na anyị enweghị ike ịlele ugbu a. Maka mba United Arab Emirates, Qatar na United States of America.
Ọrụ Nne na ụzụ NFXNXX
Ndị ụgbọ elu Singapore abụghị na ọtụtụ mmadụ abịala ebe a maka ụlọ ọrụ a. Mana ụlọ ọrụ a nwere mmepe ọkachamara na 20 ikpeazụ. Isi okwu bu iji nyere ndị ọrụ aka inweta uto zuru oke ha. Kedu ihe kpatara ị ga - eji soro ha rụọ ọrụ ị ga - eme nke ukwuu na mmepe maka ihe ọ bụla ị na - enyekwu maka ụlọ ọrụ a ga - eme ka ọkachamara na - enyere gị aka inweta gị. Na maka onye ọ bụla ga-achọ ịmalite na ha.
Companylọ ọrụ ahụ na-enye nzere agụmakwụkwọ dị elu. na-ekwukarị, ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ ọrụ onye ga enye gi nkwado ndi visa. N’ezie, ndị ụgbọ elu Singapore ga-emere gị ihe ahụ. ha abụghị nke kwesịrị ekwesị maka ọrụ ndị ụgbọ elu Emirates. Mana bara uru itinye ya n'ọrụ. lee anya n’okpuru webusaiti ha na gi kpebie onwe gị ma ọ bara uru ma ọ bụ na ọ baghị uru.
Qatar maka ndị ụgbọ elu Emirates ọrụ na Middle East. Ọtụtụ narị ohere ugbu a na Qatar. Islọ ọrụ a maara nke ọma gburugburu Elekere ha na-ele anya maka ndị isi na Executive Development Executives. Ndi otu oru injinia ya na ndi oru ugbo elu ugboala, ndi ulo oru nlekota ndi oru ugbo elu. Na akụkụ dị mma nke ụlọ ọrụ a, ị nwere ike nyochaa ngwa gị. Tọọ ntọala maka ọrụ ma ọ bụrụ na ị ga-enwe mmasị na ọrụ ndị dị n'ihu. N'ihi na n'oge a enweghi ike inye gị ihe ọrụ ị na-achọ dị ka nwanyị.
Dika odi, odi nkpa nke neenye dika odi n’iru ohere mmepe atụmatụ ọrụ na weebụsaịtị. n'ezie na ọ ga-aba uru ọ ga - aga n'ihu ma tinye ma ọ dịkarịa ala 50 ruo oghere 200. N'akụkụ na-adịghị mma, nke a bụ Qatar ya mere na ọ bụghị nfe ahụ ịnweta ọrụ. Ọtụtụ n'ime ndị mmadụ gburugburu ụwa na-achọ ohere dị ịtụnanya n’obodo a. Yabụ ị ga-eso ndị India, Pakistan na ndị nnọchi anya nchịkwa mba ndị ọzọ na Middle East ọgụ.
Nchikota maka oru ugbo Emirates
Na nkebi a, anyị na-eme nkwubi okwu. Yabụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ịchọta ọrụ ụgbọ elu ngwa ngwa. N’ohaneze na ekwu ọtụtụ ọrụ m na-awa dịka onye ọkwọ ụgbọ ala na ala. Gbọ elu a na-anwale ụlọ ọrụ ma na-agbasawanye netwọkụ ngwa ngwa. Karịsịa ụlọ ọrụ na UAE. United States America na Europe ruo ugbu a na otu esi agbago ngwa ngwa n'ọdụ ụgbọ elu. Dika odi, na udiri azumahia a. Nwere ike nyochaa ọrụ ndị dị n'ọtụtụ ubi. Ruo ugbu a ị na-achọpụta atụmatụ na atụmatụ ọrụ.
Ọdụ ụgbọ elu na ọrụ ọrụ netwọkụ. Ọrụ ndị ọrụ aka na ụzụ na ụdị ọrụ yiri ibe ha. Nchekwa n’ọdụ ụgbọ elu bụkwa nnukwu ọrụ. N'aka nke ozo, anyi nwere ezigbo oru. Atụmatụ idozi ụgbọ elu na ubi Logistics. Mgbe ah ọrụ ụlọ ọrụ na ndị azụmaahịa dịkwa mma inweta ya. Begosipụta ọtụtụ ọrụ dị iche iche bụ ọrụ ndị lekwasịrị anya. Yabụ na ị dị ka onye ọrụ ị ga - agarịrị atụmanya ndị ahịa n'ọdụ ụgbọ elu.
Ụlọ ọrụ Dubai City maka ndị na-achọ ọrụ
Citylọ ọrụ Dubai City na-atụ anya ịhụ gị na edemede anyị dị iche iche. Bọọlụ anyị bụ nke emere maka ndị na-achọ Job. Ruo ugbu a ị chọtala ụlọ ọrụ kachasị mma ịrụ ọrụ. N’olile anya, itinyela aka na ụlọ ọrụ niile anyị na-enye. N'ihi na anyị bụ ụlọ ọrụ na-achọ ọrụ ma na-achọ ọrụ nyere ndị ọzọ aka ịchọta ọrụ dị ịtụnanya. Companylọ ọrụ anyị hiwere isi na Dubai. Nke a bụ ihe mere anyị ji tinye ndị Emirates. anyị jikwa nganga azụ ahịa anyị. Ọzọkwa, anyị enyerela aka ịmepụta ọtụtụ ụdị gburugburu ụwa. Yabụ, bụrụ otu n'ime otutu ndi oru anyi acho ndi oru n’uwa nile. Ruo ugbu a, anyị enyerela ndị ọrụ Saudi Arabia aka ịchọta ọrụ. Yana Indian-Pakistani ka nke mbu. Ndị Philippines na Ndị South Africa ya na ndị Iran na ụmụ amaala America.
Na-ele anya ịhụ gị ọzọ!
Companylọ ọrụ anyị ji onye ahịa anyị niile akpa nganga. ngafe Ndị na-achọ ọrụ 50,000 nwetara ọrụ site na ụlọ ọrụ anyị. Jupụtara ya nke ọ bụla yabụ ihe anyị bu n’obi na nke ahụ. Injinia marketing, Oku ndi mmadu, ndi ara, ya, oru ndi nkuzi na nkuzi. Ọrụ anyị na-enye maka ndị mba ụwa. ihe ọ bụla ị kpebiri ụdị ọrụ ị ga-enwe mmasị ka gị na ụlọ ọrụ anyị. Anyị na-achọ inye gị nke ahụ. Yabụ na-aga ma nyocha websaịtị anyị. N'ihi na anyị nwere ọtụtụ ihe nwere ike ịbara gị uru. Dị ka ọrụ achọ gburugburu ụwa.